Iphupha malunga nokuba yeyiphi ▷ ➡ Discover Online ▷ ➡️
Igama "usizi" lifumene indlela eya kwimizekeliso; Sinazo "Ngokukhetha okuninzi"xa singenakukhetha okanye sive ubunzima "Höllenqualen"xa sinengxaki yokugula, umzekelo. Ngaphezulu kwesinye imbongi sibhala malunga nosizi olubangelwe sisithandwa sakhe ngokungammameli okanye ukumenza alinde.
Ukuthuthumbisa kukwaligama eliqhelekileyo xa kufikwa kwintlalontle yezilwanyana. Izinja ezikhuliswe ngemifinya emifutshane, okanye iintlanzi ezinamaphiko amade kakhulu, azivumeli ukuba ziqhubele phambili, zithathwa ngokuba "zizinto ezingcungcuthekisayo." Kwaye nakwimibhalo malunga nokulima okunzulu nazo zonke iziphumo ezibi kwizilwanyana, ukungcungcutheka kuhlala kuthethwa ngako.
Imfundiso yobuKrestu ilumkisa umntu okholwayo ngokuthuthunjiswa esihogweni emlindeleyo ukuba uphila ubomi obuchasene nemithetho yobuKrestu. Kwangelo xesha, abantu bayathuthunjiswa xa bephethwe zizigulo ezinganyangekiyo emzimbeni nasengqondweni kwaye befumana iintlungu ezingapheliyo. Uninzi lwezigulana ezinqwenela sele zikhethile ukuzibulala (ukuzibulala) njengecebo lokugqibela kule meko.
Ukuba sihlangabezana nosizi okanye ukungcungcutheka ephupheni, oku kungoyikisa kwaye kungaphazamisi. Kodwa ungakhathazeki: njengophawu lwephupha, iintlungu zitsala ingxabano yangaphakathi, ke kufuneka ziqondwe ngokufuziselayo.
1 Uphawu lwephupha «intuthumbo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «intuthumbo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «intuthumbo» - ukutolika ngokomoya
Uphawu lwephupha «intuthumbo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ubuhlungu ephupheni bubonisa izehlo ezingasetyenziswanga o Iimvakaleloeqhuba amaphupha. Nabani na ekufuneka eve iintlungu ephupheni okanye ade athuthunjiswe, utsalela ingqalelo yakhe kwimbandezelo ecinezelweyo kwiimeko ezininzi.
Esi sifo kunqabile ngokwasendalweni ngokwendalo, ngakumbi kubhekiswa kwesinye. iintlungu zengqondo. Oku kunokugwetyelwa kuthando olungazalisekanga, kodwa ukuba abahlobo baliphatha kakubi iphupha okanye bazive belahliwe, oku kungabonakaliswa emaphupheni wentuthumbo nentlungu. Ukunyamezela ubunzima, ukubandezeleka nokunyamezela kuthule kuthetha ukuba ngaphezu kwako konke IntuthuzeloUncedo lusendleleni kwaye kuyanceda ukuba nomonde.
Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, ukuxhathisa kwesigulana kungabonisa isilumkiso sokuba iphupha liza kujika libe yimeko engonwabisiyo ngaphandle kwesiphoso sabo okanye amava amabi.
Nabani na othuthumbisa okanye othuthumbisa abanye abantu okanye izilwanyana ephupheni, mhlawumbi ngenxa ye-sadism, kungenzeka ukuba angonwabi okanye iintlungu. Ke ayisi malunga neepropathi "ezimbi" zephupha, kodwa malunga nokubandezeleka oziva kuko.
Ukugodola kunokuvakala kungcungcutheka xa ulele. Le meko yamaphupha ke ibonisa impilo enkenenkene, ekufuneka kwenziwe into ngayo.
Uphawu lwephupha «intuthumbo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba umntu uphupha ukuthuthunjiswa okanye ukuthuthunjiswa, kunokubakho ukubandezeleka okwenyani emva kwako. Nangona kunjalo, ngaphezulu kwayo yonke into yintlungu yengqondo kude kube ngoku ayikacwangciswa kwaye ngoku ibekwe ephupheni ngoncedo lwemifanekiso ekrwada kunye enobundlobongela.
Ukuba ithuthumbisa ezinye izinto eziphilayo, inye ingqikelelo Ukusuka kwintlungu yakho, unokuziva uxinekile, uxinezelekile okanye ungonwabi ngobomi bakho okanye imeko yangoku kwaye uyohlwaya (ephupheni, umntu omelweyo uboniswa ngomnye umntu okanye isilwanyana).
Ukuba amaphupha anje avela rhoqo, umntu ophuphayo kufuneka azibuze ukuba uzityhola athini, yintoni unobangela wakhe ukuhlaselwa athi ngokungazi yena aziqondise kuye. Ukucinezela kunye nokukhanyela ukubandezeleka kuya kukhokelela kuphela ekubandezelekeni ekuhambeni kwexesha.
Uphawu lwephupha «intuthumbo» - ukutolika ngokomoya
Ngokwasemoyeni, umfuziselo wephupha "ukuthuthumbisa" kuthetha ukufana nomfuziselo wephupha "ungcungcuthekiso" elo liphupha lingaphakathi kulo Impikiswano ifunyenwe. Uphakathi Amathumbu y Uyacaphukaabalwela ukongama kuyo.